Ny fiverenan'ny tompon'antoka manankarena eran-tany? | | Robots sy famantarana forex automated
Skype: Signal2forex WhatsApp: 79065178835 +
Categories rehetraTsy misy sokajy (4)Forex robots (13)Free download (10)Indikatoren (1)Open code EAs (4)
Vaovao ara-bola sy ara-toekarena
Forex sy ny orinasa vaovao
Vaovao sy hevitra momba ny vola
Vaovao amin'ny banky Central
Ahoana ny fomba hivarotana tombony
Fanadihadiana fototra momba ny tsena Forex
Fanadihadiana ara-teknikan'ny tsena Forex
Hevitra momba ny varotra
Home » Vaovao sy hevitra momba ny vola »Ny fiverenan'ny mpandrindra ny harena manerantany?
Ny fiverenan'ny tompon'antoka manankarena eran-tany?
26.05.2020 Admin 0 Vaovao sy hevitra momba ny vola,
A mijery ny fitantanana harena tany amin'ny orinasa lehibe indrindra tamin'ny faran'ny ampahefany voalohany dia nanaporofo fa marina ilay hypotesa: asa fitantanana ny harena no asa tsara ilaina. UBS Global We Management Management nampitombo ny tombom-barotra niasa talohan'ny taona hetra tamin'ny taona ho 1.2 miliara dolara avy amin'ny $ 863 tapitrisa, na dia latsaka ny 2.3 miliara dolara aza ny fananana entana.
Mbola hita eo ny hoentin'ny ampahefa-potoana faharoa rehefa mihena ny hetsika ataon'ny mpanjifa. Mahaliana ny hahitana hoe iza no manangona fananana vaovao net satria, amin'ny fotoan'ny krizy dia mahita ny mpanjifa raha ny tena izy no miasa ny mpikirakira azy ireo.
Efa ny sasany amin'ireo manampahefana harena no milaza fa nahita fihenam-bidy be izy ireo rehefa narian'ny mpanjifa ny mpanolotsaina hafa. Tsy azo ihodivirana ny fampivondronana ny fizarana poketra.
Iza no mandresy izany? Mazava ho azy fa ireo izay nijanona ho nanatanteraka fitantanana harena dia tamin'ny folo taona lasa - ireo izay nanambatra ny teknolojia, torohevitra sy ny fizarana fananana. Saingy, ireo izay raisina ho mpivady azo antoka tsara indrindra - ny farany dia mazàna ny mpitantana Swiss lehibe sy ny banky amerikana.
Fa na misy aza ny fanamafisana dia misy koa ny fanavaozana hanavaozana satria ny banky iraisampirenena no mahita ny sandan'ny orinasa fitantanana harena. Goldman Sachs dia nanambara tamin'ny volana Mey fa mividy orinasa mpandraharaha Folio.
Ny vanim-potoana io dia mety hitarika miverina tsikelikely koa ny tompon'andraikitra amin'ny harena manerantany. Tao anatin'ny 10 taona lasa izay, ny mpilalao harena an-tany lehibe teo aloha - Deutsche Bank, Merrill Lynch, Credit Suisse, HBSC, Citi ary Barclays - dia samy nihemotra, na nihemotra intsony ny orinasa, na nanjary tsy hita maso intsony.
Ny UBS no tompon'andraikitra lehibe indrindra eto an-tany farany hita farany, azo antoka fa eo amin'ny tsena isaina ho an'ny fitomboana: Azia sy Amerika Avaratra.
Araka ny Ny tatitra momba ny harena an-tsain'i Credit Suisse, 29.4% amin'ny harena an'izao tontolo izao dia mipetraka any Etazonia ary 2.4% any Kanada, 17.7% any Sina, 6.9% any Japon, 3.5% any India ary 2% any Korea.
Ny mpifaninana lehibe indrindra (raha tsy hoe hiverina any Etazonia i Credit Suisse) Morgan Stanley.
Tamin'ny fahazoana an'i Smith Barney ary nifantoka betsaka tamin'ny tsenan'ny US any an-toerana, dia tamim-pahamalinana nanangana ny fitantanana ny harena manerantany ny orinasa. Nanambara tamin'ny volana Mey ny fananganana Canada Wealth Management.
Tamin'ny volana martsa, Morgan Stanley sy Mitsubishi UFJ Financial Group dia nilaza fa hanitatra ny fifandraisan'izy ireo izy ireo amin'ny fampivoarana ny asan'ny fitantanana harena. Ary tany Azia taloha-japon, dia nanarina haingana ny sehatra mpanankarena tsy manam-bola sy ny harena an-kibon'ny tany lehibe indrindra. Izany rehetra izany rehefa mahazo koa E * varotra.
Miaraka amin'ny fifaninanana lehibe kokoa avy amin'ny mpifaninana amerikana lehibe ary koa ny fifaninanana amin'ny ankapobeny, dia hiharan'ny fanerena ny UBS mba tsy ho very ny satro-boninahitra.
Previous: Vaovao farany momba ny vaksiny Coronavirus dia mampitombo ny loza mety hitranga indray, dolara amin'ny fianjerana afaka
Next: Nahazo tanjaka ny vidin'ny trano rehefa nikatona ny toekarena coronavirus tamin'ny volana martsa, hoy i S&P Case-Shiller
BOKY CODE EAS
Ny manam-pahaizana tsara indrindra sy fiarovana anay dia Megastorm v.10.9. Izahay dia manamafy ny valiny amin'ny horonantsary mivantana!
Mametraka rindrambaiko mpizara amin'ny mpizara VPS amin'ny iray amin'ireo mpamatsy haingam-be:
Signal2forex.com - Best robots Forex sy famantarana
Te hanana tombony sy tabilao ve ianao? Safidio ny Megastorm EA ho varotra eo amin'ny tsenan'ny Forex ...
mandeha ho azy ara-barotra forex tsara indrindra Robot Indeksan-doka ADX fampitandremana mpikaroka forex. CCI forex EA maimaimpoana forex robot 2020 Forex robot maimaim-poana download forex scalper robot Intraday autotrading robot afaka Keltner channel autotrading robot forex robot averina mandroso Hamindro endriky ny forex
Ny mpiara-miasa aminay: Forexfactory1.com, Forexrobots24.com
2018-2020 © serivisy Signal2forex. Zo rehetra voatokana.
Ny fitaovana na ny vokatra rehetra nalaina avy amin'ity tranokala ity nefa tsy nahazoana alalana avy amin'ny tompon'ny zon'ny mpamorona ny Unitrating Ltd dia fandikana ny zon'ny mpamorona.
Raiso fampitandremana: Ny tranonkala Signal2Forex dia tsy hitondra ny andraikitra amin'ny fahaverezan'ny volanao noho ny fampiasana vokatra novidina tao amin'ity tranokala ity, ka anisan'izany ireo mpanolotsaina manam-pahaizana sy famantarana. Na koa ny vidin'ny Forex sy ny quotes naseho tao amin'ny informatiora dia mety tsy marina ary mety tsy mitovy amin'ny vidin'ny tsena, izay midika fa ny vidiny dia manondro sy tsy mety amin'ny raharaham-barotra. Tsy maintsy takatrao ny mety ho fiantraikany sy ny fandaniana amin'ny fifanakalozana tsena ara-bola, izany no iray amin'ny riskiest investment forms azo atao.
Zarao ity vokatra ity!